FAQ - Bamawl
Let’s make the world more productive
ရုံးတက်/ ရုံးဆင်းချိန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း
BAMAWL HR System ကို Attendance Device (သို့မဟုတ်) Face Recognition Device နဲ့ဘယ်လို ချိတ်ဆက်မလဲ?
Attendance Device အတွင်းရှိ ရုံးတက်/ရုံးဆင်း ချိန်များကို Raspberry pi device မှတစ်ဆင့် BAMAWL HR System ထဲသို့ အလိုအလျောက်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Attendance Device အသုံးမပြုပါက တိကျတဲ့ Attendance Data ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ?
BAMAWL Mobile Application ရဲ့ Check In/Check out Request function ကို အသုံးပြု၍ နေ့စဥ် တိကျသော ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်များကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Approver မှလည်း ဝန်ထမ်းများ၏တည်နေရာ, ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ Attendance Data များကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ခွင့် အမျိုးအစားများအား ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါသလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလုပ်သမားဥပဒေအောက်မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ ခွင့်အမျိုးအစာများ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ထိုခွင့်များထဲမှ ဝန်ထမ်းများခံစားခွင့်ရှိတဲ့ ခွင့်အမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
System မှာ မတူညီသော Shift assign များ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါသလဲ?
Excel format မှတစ်ဆင့် ဝန်ထမ်းများရဲ့ အမျိုးမျိုးသော Shift assignments များကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Allowance and Deduction သတ်မှတ်ချက်
System ထဲမှာ Overtime / Allowance & Deduction နည်လမ်းများ ထည့်သွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား?
Overtime, Allowance & Deduction တွက်ချက်သည့် နည်းလမ်းများကို တိကျသေချာစွာထည့်သွင်း တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း data တစ်ခုချင်းဆီကို တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ company တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ လစာတွက်ချက်ပုံနည်းလမ်းများ မတူခဲ့ရင် HR System ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းများရဲ့ တူညီတဲ့လစာတွက်ချက်ပုံနည်းကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် ကျန်ရှိသော ဝန်ထမ်းများရဲ့ အခြားသော လစာတွက်ချက်နည်းကိုလည်း ထပ်မံရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Personal Income Tax (PIT) ကို System မှာ ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲ?
ကျွန်န်ုပ်တို့ရဲ့ System က ၂၀၂၁ မြန်မာ့ အခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့ ဥပဒေအောက်မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ Personal Income Tax (PIT) တွက်ချက်နည်းများကိုထည့်သွင်းပေးထားသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများရဲ့ လစဥ် Income Tax ‌amount များကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းများရဲ့ လစာတွေကို Bank မှတစ်ဆင့် ပေးချေနိုင်ပါသလား။
BAMAWL HR System မှတစ်ဆင့် ဝန်ထမ်းများ၏လစာတွေကို CB Bank & KBZ Bank တို့ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘူး MPT money ဖြင့်လည်းလစာများကိုပေးချေနိုင်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Company အနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ Bank တွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
System ရဲ့ “Security” နဲ့ပတ်သပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြပေးနိုင်မလား?
BAMAWL HR System ကို Google Cloud Platform တွင်ထားရှိပြီး User Data များကို Database ကုဒ်များဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည့်အတွက် Customer များရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ကြည့်ခွင့်မရနိုင်ပါ။
System ကို Own Server နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
မရပါဘူး။ BAMAWL HR System ကို SaaS ( Software asaService) အနေနဲ့ဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။